AHOANA NY FOMBA HAMPIASANA NY MAODY MAIZINA YOUTUBE - MALEMY
Amin'ity tontolon'ny teknolojia ity dia mifamatotra tsy tapaka amin'ireo gadget sy ny efijery misy antsika isika. Ny fampiasana gadget be loatra mandritra ny fotoana maharitra dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamantsika, ary mety hampihena ny fahitantsika rehefa mijery tsy tapaka ny takelaka nomerika amin'ny tontolo maivana isika. Raha misalasala ianao mieritreritra fa inona ny fihemorana lehibe hijerena ny efijeran'ny rafitrao eo am-pananganana hazavana ambany? Avy eo avelao aho hiteny aminao fa mifandraika amin'ny jiro manga izay avoaka amin'ny efijery informatika izany rehetra izany. Na dia manohana aza ny jiro manga amin'ny fijerena ny efijery nomerika ao ambanin'ny hazavan'ny masoandro mamirapiratra, rehefa mijery efijery nomerika mamoaka jiro manga mandritra ny alina ny mpampiasa solosaina mandritra ny alina na amin'ny fametrahana hazavana ambany dia mety hiteraka reraka amin'ny sain'ny olombelona izany satria miteraka fikorontanana mankany ny selan'ny atidohanao, ny fihenan'ny masonao ary mampihena ny tsingerin'ny torimaso mety hanimba ny fahasalamanao.
Ka, mitondra lohahevitra maizina ny YouTube izay, aorian'ny famelana azy, dia afaka mampihena ny vokatry ny hazavana manga ao amin'ny tontolo maizina ary mampihena ny fihenjanana amin'ny masonao koa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny fomba ahafahana mamela maody maizina ho an'ny YouTube anao.
Windows windows 10 mihodina
Fomba 1: Alefaso amin'ny Internet ny maizina YouTube
Fomba 2: Ampandehano tanana ny maody maizina YouTube
1. Sokafy ny tranokala tianao indrindra.
2. Soraty amin'ny bara adiresy: www.youtube.com
3. Ao amin'ny tranokalan'ny YouTube, kitiho ny sary famantarana eo amin'ny zorony ambony havanana. Hipoitra miaraka amin'ny lisitra safidy vaovao ho an'ny kaontinao izy io.
mampiasa flash drive toy ny ram windows 10
4. Safidio ny Lohahevitra maizina safidy avy amin'ny menio.
5. Tsindrio ny Bokotra ahodina HANATSARA hamelana ny lohahevitra maizina.
6. Ho hitanao fa miova amin'ny lohahevitra maizina ny YouTube, ary toa izao ny fijeriny:
Fomba 2: M ara-potoana Ampandehano ny maody maizina YouTube
Raha tsy mahita ny YouTube Dark Mode ianao dia aza manahy fa mampiasa io fomba io, azonao atao ny mamela ny lohahevitra maizina ho an'ny YouTuber manaraka ireto dingana ireto:
Ho an'ny Browser Chrome:
1. Misokatra YOUTUBE amin'ny browser Chrome.
2. Sokafy ny menio an'ny Developer amin'ny alàlan'ny fanindriana Ctrl + Shift + I na F12 .
excel frozen ny fomba fitsitsiana
3. Avy amin'ny menan'ny developer, mifamadiha amin'ny hampionona kitiho & ampidiro ity kaody manaraka ity ary tsindrio Enter:
4. Ankehitriny ampifamadiho ny maody maizina mankany ON avy amin'ny Fikirana . Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mamela ny maody maizimaizina ao amin'ny tranonkalanao ho an'ny tranokala YouTube.
Ho an'ny Browser Firefox:
1. Ao amin'ny karazana bara adiresy www.youtube.com ary midira amin'ny kaontinao YouTube.
2. Tsindrio ny andalana telo (Fitaovana) avy eo misafidy Web Developer safidy.
3. Safidio izao Console-tranonkala & ampidiro ity kaody manaraka ity:
4. Ankehitriny, mandehana mankany amin'ny piraofilinao ao amin'ny YouTube & kitiho ny maody maizina safidy.
windows 10 ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny fanavaozana
5. Ampifamadiho amin'ny bokotra ON ny bokotra raha te hampandeha ny maizina maody YouTube.
Ho an'ny Microsoft Edge Browser:
1. Mandehana mankany www.youtube.com & midira amin'ny kaontinao YouTube ao amin'ny browser-nao.
2. Ankehitriny, sokafy Fitaovana Developer ao amin'ny navigateur Edge amin'ny alàlan'ny fanindriana Fn + F12 na F12 lakile hitsin-dàlana.
3. Mifamadiha amin'ny hampionona ampidiro & ampidiro ity kaody manaraka ity:
rehefa tsy miasa intsony ny chrome google
4. Tsindrio Ampidiro & havaozy ny pejy hahafahanay ‘ Maody maizina ’Ho an'ny YouTube.
Esory ny Internet Explorer amin'ny Windows 10
Fomba 5 hanalana sary avy amin'ny rakitra PDF
Ahoana ny fanovana ny mpampiasa anarana kaonty amin'ny Windows 10
Ahoana ny fomba ampanjifaina ny Screensaver amin'ny Windows 10
Manantena aho fa nanampy ireo dingana etsy ambony, ary afaka mora aminao izao ampandehano ny YouTube Dark Mode amin'ny navigateur Chrome, Firefox, na Edge , fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity torolalana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
ny fomba fanavaozana ny mpamily video Windows 8.1
ny fifandraisana diso dia namarana Chrome
maninona no tsy miasa amin'ny laptop i netflix
Windows 10 kinova 1803 tsy nahomby
Tsy afaka mifandray amin'ny serivisy fanavaozana ny fanavaozana ny windows
windows 7 mihodina boribory tsy tapaka